जुलाने भनेको के हो? जन्म नियन्त्रण प्याच लाभ र साइड इफेक्ट - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, चेकआउट मनोरञ्जन कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कम्पनी प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी भारी खेल समुदाय चेकआउट समाचार, कल्याण
मुख्य >> औषधि जानकारी >> तपाइँलाई जन्म नियन्त्रण प्याच, Xulane को बारे मा थाहा हुनु पर्छ
तपाइँलाई जन्म नियन्त्रण प्याच, Xulane को बारे मा थाहा हुनु पर्छ
के तपाईं जन्म नियन्त्रणको एक प्रभावकारी विधि खोज्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंले प्रत्येक दिनको बारेमा सोच्नुहुन्न? यदि एक आईयूडी वा जन्म नियन्त्रण शट धेरै प्रतिबद्धता जस्तै महसुस तर दैनिक गोली पपिंग वा मासिक योनी रिंग प्रयोग एक परेशानी, साप्ताहिक जस्तो देखिन्छ जन्म नियन्त्रण प्याच तपाईको गति बढी हुन सक्छ।
यस अनुसार CDC , लगभग ११% महिलाहरूले कहिल्यै गर्भ नियन्त्रण प्याच प्रयोग गरेका छन्, र यो कन्डम वा जन्म नियन्त्रण गोलिहरूको रूपमा चिनिन सकेको छैन, जो कोही पनि गर्भावस्था रोक्नको लागि यो एक प्रभावी विकल्प हो। यस contraceptive को रूप को पक्ष र विपक्ष जान्न को लागी पढ्नुहोस्।
जन्म नियन्त्रण प्याच के हो?
जन्म नियन्त्रण प्याच, जसलाई ट्रान्सडर्मल गर्भनिरोधक प्याच वा साधारण प्याच पनि भनिन्छ, जुलान नामको अन्तर्गत उपलब्ध हार्मोनल जन्म नियन्त्रणको सामान्य प्रकार हो। यो पातलो, बेज रंग पट्टी हो जुन तपाईं १. inches इन्च चौडा हुनुहुन्छ जुन तपाईंको पेट, माथिल्लो पाखुरा, नितम्बहरू वा पछाडि छालामा ब्यान्ड-एडको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईंले हप्तामा एक पटक नयाँ प्याचमा राख्नुभयो, हरेक हप्ता उही दिनमा। यो पहिले ओर्थो इभ्राको रूपमा चिनिन्थ्यो, तर त्यसलाई बजारबाट हटाइएको थियो जब जेनेरिक २०१ula मा जारी गरिएको थियो।
जन्म नियन्त्रण प्याचले कसरी काम गर्छ?
जन्म नियन्त्रण प्याचले तपाईको शरीरमा ट्रान्सडर्मलीमा नै अर्थात् हार्मोनस एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टिनको मिश्रण (इथिनिल एस्ट्रैडिओल र नोरलिजेस्ट्रोमिनको रूपमा) लगातार जारी गरेर गर्भावस्थालाई रोक्छ। जन्म नियन्त्रण प्याच धेरै कम खुराक जन्म नियन्त्रण पिलहरु जस्तै हार्मोनल श्रृंगार छ।
हार्मोनल गर्भनिरोधका अन्य प्रकारहरू जस्तै, प्याचले तीन फरक तरिकाले गर्भावस्थालाई रोक्छ। पहिले, यसले ovulation रोक्छ, यो महीनाको समय जब तपाइँको अंडाशयले निषेचनको प्रत्याशामा एक परिपक्व अण्डा छोड्छ। त्यसो भएपछि प्याचमा भएका हर्मोनहरूले तपाईंको गर्भाशय ग्रीवालाई दाट बनाउँदछ र शुक्राणुहरूको लागि कुनै अवरुद्ध अण्डाहरूलाई उर्वर बनाउन अझ गाह्रो हुन्छ। अन्तमा, यसले गर्भाशय अस्तर पातलो पार्छ, त्यसैले निषेचित अण्डा रोप्न यो धेरै नै गाह्रो हुन्छ।
कसरी स्वास्थ्य बीमा बिना जन्म नियन्त्रण प्राप्त गर्न
यो प्रयोग गरिसके पछि प्याचले कति चाँडो काम गर्न थाल्छ तपाइँ कहाँ मासिक चक्रमा हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया, पहिलो गर्भ निरोधक प्याच लागू गरेपछि, तपाइँले सात दिन कुर्नु पर्छ यो गर्भावस्थाको बिरूद्ध पूर्ण रूपमा सुरक्षा हुन सक्दछ। यस बीचमा, कन्डम जस्तो ब्याकअप विधि प्रयोग गर्नुहोस्। प्याच% 99% प्रभावी छ यदि यो सहि संकेत जस्तै प्रयोग गरीन्छ भने; वास्तविकतामा, यो करीव% १% प्रभावी छ।
म कसरी जन्म नियन्त्रण प्याच प्रयोग गर्ने?
तपाईंले पहिले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग जन्म नियन्त्रण प्याचको लाभ र विपत्तिहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्नेछ, साथै कुनै स्वास्थ्य जोखिम पनि। प्याच केवल पर्चेको द्वारा उपलब्ध छ।
प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त गरिसकेपछि, तपाईले पहिलो प्याच आफ्नो अवधिको पहिलो २ hours घण्टामा लागू गर्नुहुनेछ। यो तुरुन्तै प्रभावकारी हुनेछ बैकअप गर्भनिरोधक विधिहरूको आवश्यक पर्दैन (तथापि, यौन संक्रमित संक्रमणहरू, वा एसटीआईको बिरूद्ध संरक्षण अझ आवश्यक छ)। अर्को विकल्प भनेको पहिलो प्याडे पहिलो आइतवार तपाईको अवधि सुरु भएपछि लागू गर्नु हो जुन आउँदो सात दिनको लागि ब्याकअप विधि प्रयोग गर्नु आवश्यक पर्दछ। पहिलो दिन तपाईंले ट्रान्स्डर्मल प्याच लागू गर्नुहुनेछ तपाईंको प्याच परिवर्तन दिवस, त्यसैले यसलाई तपाईंको पात्रोमा चिन्ह लगाउनुहोस्!
आफ्नो विकल्पहरूको बारेमा आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् यदि तपाईं फरक जन्म नियन्त्रण विधिबाट प्याचमा स्विच गर्दै हुनुहुन्छ, वा प्याच सुरु गर्दै हुनुहुन्छ प्रसव वा गर्भपतन जस्ता घटना पछि।
तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाइँलाई प्याच कसरी लागू गर्ने भन्ने बारे चरण-चरण जानकारी दिनुहोस् ताकि यो प्रभावी छ। तपाईंको प्रणालीमा हर्मोनहरू ठीकसँग वितरण गर्नको लागि प्याचको टाँसिएको पक्ष तपाईंको शरीरको केही खास भागहरूमा राख्नुपर्छ। यो तपाइँको माथिल्लो बाहिरी बाहु, पेट, ढु .्गा, वा पछाडि यस्तो ठाउँमा राख्न सकिन्छ जहाँ यसलाई सजिलैसँग माला वा पट्टि वा कपडाहरूबाट चिडिदैन, जस्तै तपाईको स्तनहरूमा। तपाईंको प्याचलाई सफा, सुक्खा छालामा लागू गर्न निश्चित गर्नुहोस्। कुनै पनि प्रकारको मेकअप, लोशन, वा तेलले प्याचलाई ढिलो बनाउन, झर्छ वा अन्यथा प्याचको प्रकार्यमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ।
जब तपाइँ पहिलो पटक तपाइँको प्याच लागू गर्नुहुन्छ, १० सेकेन्डको लागि प्रेशर लागू गर्नुहोस् यो निश्चित गर्नुहोस् कि यो पूर्ण रूपमा पालना गरिएको छ, र कुनै पनि झुर्राहरू मिल्छ। त्यसो भए, यसलाई नुहाउन वा व्यायाम नगरीकन सात दिनसम्म लगातार राख्नुहोस्। प्रत्येक हप्ता प्याच प्रतिस्थापन गर्दा, तपाईंले नयाँ प्याच पुरानो प्याचबाट फरक स्थानमा राख्नुपर्दछ। तपाईं लोशन वा तेलको साथ कुनै पनि अवशिष्ट स्टिकनेस बन्द गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईको छालामा दृढ रूपमा जोडिएको छ भनेर निश्चित गर्न प्रत्येक दिन तपाइँको प्याच जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईंले याद गर्नुभयो कि यो बन्द आएको छ वा उत्तम रूपमा छैन र यो एक दिन भन्दा कम भएको छ भने, यसलाई पुन: लागू गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि प्याच पूर्ण रूपमा टाँसिएन भने, यसलाई नयाँ प्याचको साथ तुरून्त बदल्नुहोस्। कुनै पनि जगेडा गर्भ निरोधको माग छैन। यदि यो पूर्ण दिन भन्दा बढीको लागि बन्द गरिएको छ वा यो निश्चित छैन कि यो कति लामो समय सम्ममा रह्यो छ, नयाँ प्याच ASAP पुन: लागू गर्नुहोस् र कम्तिमा एक हप्ताको लागि ब्याकअप जन्म नियन्त्रण विधि प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो प्याच परिवर्तन गर्नका लागि तोकिएको हप्ताको नयाँ दिनको साथ नयाँ चार हप्ताको चक्र सुरू गर्नुपर्नेछ।
यदि तपाइँ तपाइँको प्याच परिवर्तन गर्न बिर्सनुभयो तर मात्र यसलाई परिवर्तन गर्न एक वा दुई दिन ढिलो हुनुहुन्छ भने, नयाँ प्याच तुरून्त पुन: लागू गर्नुहोस्। तपाईंको अघिल्लो प्याच परिवर्तन दिन कायम गर्नुहोस्। जहाँसम्म, यदि तपाइँ नयाँ प्याच लागू गर्न दुई दिन भन्दा पछि हुनुहुन्छ भने, तपाइँले एक हप्ताको लागि गर्भनिरोधकको दोस्रो रूप प्रयोग गर्नुपर्नेछ र नयाँ-हप्ताको चक्र सुरू गर्नुपर्नेछ। याद गर्नुहोस् जुन दिन तपाइँ नयाँ प्याच लागू गर्नुहुन्छ तपाइँको नयाँ प्याच अनुप्रयोग चक्रको पहिलो दिन मानिन्छ।
तपाईं या त प्रत्येक हप्ता तपाईंको प्याच तीन हप्ताको लागि परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ र चौथो हप्ता छुट पाउनुहुनेछ, यसको मतलब तपाईं सामान्य रूपमा मासिक धर्म गर्नुहुनेछ। तपाईं हरेक हप्ता प्याच प्रयोग गर्न रोज्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको अवधि पूर्ण रूपमा छोड्नुहोस्। यो तिमीमा भर पर्छ।
Xulane साइड इफेक्ट
प्याचको सम्भावित साइड इफेक्टहरू अन्य हर्मोनल गर्भनिरोधकहरू जस्तै छन् जन्म नियन्त्रण गोली र नुभाआरिंग ।
एक्ने वा अन्य छाला समस्याहरू, जस्तै छालाको दागहरू
स्तन कोमलता वा असुविधा
कामेच्छा मा कमी
उच्च रगतमा चिनी, विशेष गरी मधुमेह भएका महिलाहरूमा
उच्च कोलेस्ट्रॉल र / वा ट्राइग्लिसेराइड्स स्तर
चिन्ता वा उदासीनता जस्ता मूड परिवर्तनहरू
मासिक पेटका वा दुखाइ
मतली, बान्ता, वा पखाला
प्याच अनुप्रयोग साइटमा छाला जलन
योनि संक्रमण वा डिस्चार्जमा परिवर्तन
जन्म नियन्त्रण प्याच को हानि के हो?
प्याच छनौट गर्न जब कारकहरू दिमागमा राखिन्छ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुनै पनि अघिल्लो वा हालको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, स्तन स्तन क्यान्सर, मधुमेह, माइग्रेन सहित, यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईं गर्भवती हुन सक्नुहुन्छ, र कुन औषधी र पूरकहरू तपाईंले लिनु भएको छ। प्याचले काम गर्ने तरीकाका कारण तपाईले वास्तवमा %०% बढी एस्ट्रोजेनको सम्पर्कमा पर्नुहुनेछ यदि तपाईले इस्ट्रोजेनको समान स्तरको साथ मौखिक गर्भनिरोधक लिइरहनुभएको छ भने। यदि तपाईं एस्ट्रोजेनप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ वा हाल स्तन क्यान्सर सहित एस्ट्रोजेन सम्बन्धी सर्तहरूको मेडिकल इतिहास पाउनु भएको छ वा हुनुहुन्छ भने, यो गम्भीरतापूर्वक लिने कुरा हो। 35 35 बर्ष भन्दा बढी धूम्रपान गर्नेहरूलाई प्याच प्रयोग नगर्न सल्लाह दिइन्छ। थप रूपमा, त्यहाँ जुलानमा केही अन्य डाउनसाइडहरू छन्:
म कसरी फ्लू लाई जित्न सक्छु?
प्याचले STIs विरूद्ध सुरक्षा गर्दैन, त्यसैले तपाइँ कन्डम प्रयोग गर्न आवश्यक छ यदि त्यो चिन्ता हो भने।
ड्रग अन्तर्क्रिया (एन्टी-जब्ती औषधि, एचआईभी औषधी, पुरानो हेपेटाइटिस सी को उपचार, र सेन्ट जोन्स वर्ट) प्याच कम प्रभावी बनाउँछ।
यो कम प्रभावकारी हुन्छ यदि तपाईं समयमै प्याच परिवर्तन गर्न असमर्थ हुनुभयो वा यदि यो नियमित तवरले ढीला भयो भने।
यो कम प्रभावी छ यदि तपाइँ १ over weigh पाउन्ड भन्दा बढी तौल गर्नुहुन्छ।
प्याच साइटमा छालाको जलन र चकत्ते हुन सक्छ।
त्यहाँ अधिक गम्भीर जोखिमहरू छन्, जस्तै रक्तको थक्का, हार्ट अट्याक, उच्च रक्तचाप, पित्ताशोथ रोग, कलेजोको क्यान्सर, र स्ट्रोक
समय प्रतिबन्धहरूको लागि प्याच प्रत्येक हप्ता एकै दिनमा परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्दछ।
जन्म नियन्त्रण प्याचका फाइदाहरू के हुन्?
Xulane प्रयोग गर्न त्यहाँ धेरै अपसाइडहरू छन्, अर्थात् यो प्रयोग गर्न सुविधाजनक हो र सजीलै उल्ट्याउन सकिन्छ (केवल प्याच हटाएर)। यो शट वा IUD को रूपमा लामो-अभिनय को रूप मा आक्रामक छैन, र यो साइड इफेक्ट हार्मोनल जन्म नियन्त्रण को अन्य रूपहरु संग तुलना गर्न सकिन्छ।
Xulane जन्म नियन्त्रण प्याच कसरी प्राप्त गर्ने
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग प्याचको पक्ष र विपक्षमा छलफल गरेपछि, उसले वा तपाईंलाई प्रिस्क्रिप्शन लेख्दछ। Xulane अधिकांश बीमा योजनाहरु द्वारा कभर गरिएको छ, तर यसको बीमा बिना तीनको प्याकको लागि three १ .० सम्म लाग्न सक्छ - जब सम्म तपाईं SingleCare जस्ता छुट कार्यक्रमहरू प्रयोग गर्नुहुन्न।
यहाँ छ पूर्ण ब्रेकडाउन के बीमा बिना जन्म नियन्त्रण प्राप्त गर्न खर्च लाग्नेछ, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको भ्रमण सहित। तपाई जस्तो स्वास्थ्य केन्द्रको पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ नियोजित अभिभावक त्यो तपाइँको आय मा निर्भर गर्दछ तपाइँ संग काम गर्दछ।
percocet 10 325 को लागी जेनेरिक के हो
कसरी स्याउ साइडर सिरका तपाइँको स्वास्थ्य को लागी राम्रो छ
के तपाइँ monistat 1 संग fluconazole लिन सक्नुहुन्छ
कति ibuprofen दैनिक लिन को लागी सुरक्षित छ
एक गर्भवती महिला पेट दुख्ने को लागी पेप्टो बिस्मोल लिन सक्नुहुन्छ